Momba anay - Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd.
Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd., natsangana tamin'ny 18 feb 2020, ny teo alohany dia Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co., Ltd.
Orinasa sampana No.2
Ny orinasa dia ampiasain'ny departemantan'ny siansa sy teknolojia any amin'ny faritanin'i Guangdong, birao siantifika sy teknolojia ary governemanta ao amin'ny distrikan'i Guangzhou Baiyun. Manana ekipa R&D matanjaka izahay, 1 Ph.D, injeniera zokinjokiny 2, tompona 5, ary mpiasa injenieran'ny 50 manana diplaoma bakalorea, manarona karazana laser, milina, elektronika, herinaratra, hydraulic, rindrambaiko, teknolojia R&D ary fampiharana. fampidirana.
Ny tanjonay voalohany dia ny hamokatra masinina misaron-tava haingam-pandeha hamaly ny fangatahana maika ny tsena anatiny sy ivelany. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana, manana mpiasa mihoatra ny 600 izahay izao. Ny velaran-javamaniry dia mihoatra ny 16.000 metatra toradroa.
Miorina ao amin'ny Park Science & Technology of Baiyun, mifantoka amin'ny fitaovana marani-tsaina izahay, ao anatin'izany ny fampiraisana miampy, fitaovana ultrasonic, masinina saron-tava ary fitaovana mifandraika amin'izany, robina marindrano maromaro, milina fanapahana laser 3D, robot indostrialy manokana sy tsy manara-penitra, olombelona- robot fiaraha-miasa robot.
Ny vokatray rehetra dia novokarina araka ny fenitry ny CE, CCC, ISO 9001, ary manatsara hatrany ny fenitra hahatratrarana ny fitakian'ny mpanjifa. Nanangana ekipa serivisy iray izahay, hamaha haingana sy haingana ireo karazana fanontaniana sy olana amin'ny mpanjifa.
Ny vokatray dia atokisan'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao, mahatratra 1000 ny vokatra mivoaka isam-bolana. Ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha iray servo maotera servo masinina, mihazakazaka mihazakazaka, vidin'ny fifaninanana, derain'ny mpanjifanay.